Amakhulu aphumile kwimpambano yaseSardinia njengoko iRoma icela uncedo lwe-EU
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Amakhulu aphumile kwimpambano yaseSardinia njengoko iRoma icela uncedo lwe-EU
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • iindaba • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Amakhulu aphuma kumlilo wasendle waseSardinia njengoko iRoma icela uncedo lwe-EU
NgoMvulo, imililo ethe yaqhubeka ngempela veki ibisaqhubeka ukusondela kwiidolophu zaseSardinia ezili-13, ngaphandle kwemizamo yeenqwelomoya zomlilo ezili-11 kunye nabasebenzi bomlilo emhlabeni.
Imililo yasendle itshabalalisa iSardinia yase-Itali.
Amakhulu abahlali bendawo kunye nabakhenkethi baphuma kwintlekele ezayo.
Urhulumente wase-Itali ucela uncedo lwe-EU ukulwa imililo yasendle yaseSardinia.
Ngaphezulu kweehektare ezingama-20,000 50,000 (iihektare ezingama-XNUMX XNUMX) zehlathi nomhlaba zonakalisiwe kwisiqithi sase-Itali Sardinia njengoko imililo yamadlelo emikhulu ihlasela ummandla waseMontiferru kwicala lasentshona lesiqithi. Ukuqhambuka kwalula nakwimpuma yeOgliastra.
Amakhulu aphuma kumlilo oshushu waseSardinia njengoko iRoma icela uncedo lwe-EU
Irhuluneli yommandla, uChristian Solinas, wayibiza ngokuba “yintlekele engenakuthelekiswa nanto” ngethuba ezisa imeko yonxunguphalo ngeCawa.
Iindonga zomlilo ezihamba kwithambeka lentaba eSardinia zize zivale kwezinye iindawo zokuhlala, njengoko iziqhuma zomsi omnyama zitshabalalisa isibhakabhaka ngaphezulu. Inqwelo moya yokucima umlilo-ibhombu evutha umlilo ziimitha kude namakhaya.
Amakhulu abahlali balapha kunye nabakhenkethi bakhutshwa kwesi siqithi njengoko abasemagunyeni bafuna ukubakhusela kule ntlekele izayo.
Njengoko abacimi-mlilo kunye nabaphenduli bokuqala besilwa ukuze boyise i-inferno evuthayo ngomhla wesithathu ngokuthe ngqo, urhulumente wase-Italiya eRoma ucela i-European Union ukuba incede kwintlekele.
Akukhange kubekho mntu ubhubhileyo okanye wenzakeleyo okwangoku. NgoMvulo, imililo ethe yaqhubeka ngempela veki ibisaqhubeka ukusondela kwiidolophu zaseSardinia ezili-13, ngaphandle kwemizamo yeenqwelomoya zomlilo ezili-11 kunye nabasebenzi bomlilo emhlabeni.
Iinzame zeenkonzo zongxamiseko ziye zaphazanyiswa yimimoya enamandla kwaye ishushu evuthuza esiqithini. Nge-Cawa, i-Itali yacela amazwe ase-Europe ukuba ancede ekulweni nemililo kwaye ibacele ukuba bathumele iinqwelomoya ezizodwa zokulwa umlilo. Ukuphendula, i-EU ivumile ukuthumela iinqwelomoya ezine zaseCanadair ukunceda i-Itali. Ababini kubo babonelelwa yiFrance kwaye esinye isibini yiGrisi.
"Ngala maxesha anzima, sima kunye," Inkulumbuso yase-Greek u-Kyriakos Mitsotakis utshilo kwi-tweet ngoMvulo, ngelixa ebhengeza inyathelo.